रमेश प्रसाई र कल्पना दाहाल देउसीमै बिहे गर्छु भन्दा इन्द्रेणी टिमलाइ मिल्यो यति धरै दक्षिणा…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
रमेश प्रसाई र कल्पना दाहाल देउसीमै बिहे गर्छु भन्दा इन्द्रेणी टिमलाइ मिल्यो यति धरै दक्षिणा…हेर्नुहोस् ।
मंग्सिर ३, २०७७ बुधबार 0
काठमाडौ : तिहारको अवसरमा लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणीबाट गायक कृष्ण कंडेल संगै इन्द्रेणी टिमबाट कल्पना दाहाल र रमेश प्रसाई पनि पुगेका छन।
देउसी खेल्न गएका कल्पना र रमेश प्रसाई बीच प्रेमको चर्चा मात्रै भएन दोहोरीबाट उनीहरु बिचको सम्बन्ध छर्लङ्ग देखिन्त्थ्यो।
कल्पना दाहाल र रमेश प्रसाई बीचको देउसी भैलो संगै इन्द्रेणी टिमले पनि आफ्नो देउसी भैलो भब्य रुपमा सम्पन्न गरेको हो।
कृष्ण कंडेल संगै इन्द्रेणीकि टिका सानु,आयुसा गौतम ,छात्र शाही लगाएतका कलाकारहरु उक्त स्थानमा थिए भने देउसी भैलो बाट कंडेलले भट्याउदा निकै दक्षिणा झरेको थियो।
प्रधानसेनापति र भारतीय राजदूत भेटवार्ता !
काठमाडौं :प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र नेपालका लागि भारतीय राजदुत विनय मोहन क्वात्राबीच भेटवार्ता भएको छ ।बुधबार जङ्गी अड्डामा भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचका समसामयिक विषयमा छलफल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
केही समय अगाडि भएको भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेको नेपाल भ्रमणपछि भारतीय राजदूतको प्रधानसेनापति सँग यो पहिलो भेटघाट हो । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद टुंगो लगाउन चाँडै औचापरिक बैठक बस्ने तयारी भइरहँदा भारतीय राजदूतले प्रधानसेनापति थापालाई भेट्नु अर्थपूर्ण छ ।
Prevप्रचण्ड नसच्चिए कांग्रेससँग मिलेर सरकार संचालन गर्ने ओली निकट नेताको दावी !
Nextदुईमध्ये एक पद छोड्दा राम्रो हुने’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनियाँ राजदूतको सुझाव…हेर्नुहोस् ।
रमेश प्रसाई र नन्दाको बिबाहको कुरामा बिबाद किन ? रमेश आ:क्रोशित हुँदा कुमारले गरे सबैलाई यस्तो अनुरोध…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
प्रचण्डसंग मिलेर नयाँ पार्टी बनाउने बाबुराम भट्टराईको यस्तो प्रस्ताव…हेर्नुहोस् ।